Yakakwira Yakakwira Drywall Screws Mugadziri uye Mutengesi | Yanzhao
Drywall screws Yakagadzirwa nesimbi yakaoma kabhoni kana simbi isina waya inoshandiswa kumisikidza yakaomeswa kumatanda ehuni kana kuzvimbi zvesimbi. Dzine tambo dzakadzama kupfuura mamwe marudzi e screws, ayo anogona kuvatadzisa kubva kubvisa nyore kubva kune rakaomeswa.
Drywall screws inowanzo kuve bugle musoro screws ane akapatsanurwa tambo uye akapinza mapoinzi. Yakarongedzwa neakadzika tambo, kune maviri maviri akajairwa marudzi eakaomeswa sikuruu tambo: yakanaka tambo uye yakakora tambo.
Fine tambo yakaomeswa masikuru ane mapinza akapinza, anoita kuti zvive nyore kupinza mukati. Iwo anowanzo shandiswa kana uchisunga iyo yakaomeswa kune yakareruka simbi mhete.
Yakakora tambo dzakaomeswa masikirini ane tambo shomanana dzinovaita kuti vabatirire zvakanyanya uye kumonera munzvimbo nekukurumidza. Ivo anowanzo shandiswa kana uchisunga iyo yakaomeswa kumatanda matanda.
Kunze kwezvo, akakosha masikirini ekuomesa akagadzirwa nechinangwa chakati. Paunenge uchisunga iyo yekuomesera kune inorema simbi mhete, iwe zvirinani sarudza kuzvidzora-pachako kuchera yakaomawall screws, hapana chikonzero chekutanga-kuchera maburi.
Zvichakadaro, Kune akabatanidzwa akaomeswa masikuru. Ivo vanogona kushandiswa pane sikuruu pfuti, iyo inomhanyisa kumisikidza.
Zvakare, pane akasiyana akavharwa akaomeswa screws ayo anogona kudzivirira kubva kuora.
Drywall screws ndiyo yakanakisa nzira yekusungira iyo yakaomawall kune iyo yepasi zvinhu. Drywall screws inopa mhinduro kwayo kune akasiyana marudzi eakaomeswa masisitimu.
Inonyanya kushandiswa kusungira iwo akaomeswa mapaneru kune simbi kana huni zviwiti, iyo yakaomawall sikuruu ine yakanaka shinda yezvimbi zvesimbi uye yakakora tambo idzo dzehuni zvipenga.
Iyo inoshandiswa zvakare kusungira simbi joists uye zvigadzirwa zvemuti, kunyanya inokodzera madziro, siringi, sirin'i yenhema uye zvikamu.
Iwo akasarudzika akagadzirwa drywall screws anogona kushandiswa pakuvaka uye acoustics kuvaka.
Nhema-oxide simbi screws iri zvinyoro ngura inodzivirira munzvimbo dzakaoma. Zinc-yakafukidzwa simbi screws inodzivirira ngura munzvimbo dzakatota. Nhema ye-ultra-corrosion-resistant-coated steel screws inopesana nemakemikari uye inomira maawa chiuru emunyu spray.
Zvadaro: Hex bhaudhi
Yakanakisa Thread Drywall Zvikwiriso
Phillips Bulge Musoro Drywall Screws
Phosphated Drywall Zvikwiriso
Nhema Oxidation Hex Bolts, Din6921 Flange Nuts, Yakakwira Simba Hex Bolts, Hexagon Socket Musoro Bolts, Bolts, Dema Kuputira Hex Bolts,